Waxaa isa soo taraya baaqya nabadeed – The Voice of Northeastern Kenya
Waxaa isa soo taraya baaqya nabadeed
Waxaa isa soo taraya baaqyada nabadeed ee ay jeedinayaan culimaaudiinka, waxgaradka iyo ganacsatada Wajeer ee ku aaddan iskudhacyo dhawaan laga soo tabiyay galbeedka ismaamulkaasi sida uu ku soo waramayo Cabdiraxman Mucaawiye
Sido kale waxaa idaacadda Star FM la soo xariiray Suldaan Cabdullahi maxamad ismaaciil oo ka mid ah odayaasha Wajeer wuxuuna bulshada walaalaha ah ee ku nool galbeedka dowlad degaankasi ugu baaqay inay nabadda ku dadalaan.
Waxaa uu kula taliyay inay si deggan u wada qeybsadaan kheyraadka dhanka biyaha iyo daaqa ah.
Sido kale ugaaska ayaa intaasi ku daray inay halkaasi u direen wufuud nabadeed si ay u kala dhexdhexaadiyaan qoysaska ay dirirtu dhexmartay.
Maalmo ka hor ayuu taliyaha booliska ee Wajeer , Stephen Ng’etich xaqiijiyay inuu hal qof ku dhintay halka laba kalena ay ka soo gaareen dhaawacyo culus , isku dhacyo dhexmaray laba beelood oo walaal ah.
Waxaa uu carrabka ku adhuftay in degaankaasi loo diray ciidamo dheeraad ah oo amniga sugaya.
← Dowlada oo maanta shaaca ka qaadday tallaabooyin lagula tacaalayo shilalka
Qaar ka mid ah ismaamulada dalka oo lagu eedeyay inay ku takriifaleen lacago loo qoondeeyay →